अन्तरिक्षबाट ठुलो चट्टान दुई हप्तामै पृथ्वीमा खस्ने खतरा, कसरी बच्ने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more अन्तरिक्षबाट ठुलो चट्टान दुई हप्तामै पृथ्वीमा खस्ने खतरा, कसरी बच्ने ?
माघ ६ गते, २०७४ - १५:३१
न्युयोर्क । अन्तरिक्ष एजेंसी नासाले अन्तरिक्षमा विद्यमान एउटा ठुलो चट्टान तीव्र गतिमा पृथ्वीतिर बढिरहेको जनाएको छ । नासाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यस चट्टानको आकार संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफा जत्रो रहेको छ । यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने यो दुई हप्तामै पृथ्वीसम्म आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
‘एजे १२९ नाम दिइएको यस शिशुग्रहलाई नासाले २००२ मा नै अत्यन्तै खतरनाक रहेको बताएको थियो । अन्तरिक्षम एजेंसीका अनुसार यो शिशुग्रह केही समयपछि लगभग एक लाख किलोमिटर प्रतिघंटाको गतिले पृथ्वी को नजिकबाट गुज्रिने छ । यो गति संसारकै सबैभन्दा छिटो ७ हजार किलोमिटर प्रतिघंटाको गतिले उड्ने विमान सुपरसोनिक एक्स-१५ भन्दा १५ गुणाले बढी हो ।
कस्तो खतरा छ पृथ्वीलाई ?
नासाका अनुसार लगभग एक किलोमिटर भन्दा पनि बढी चौडाइको यो शिशुग्रह पृथ्वीसँग ठोक्किए पृथ्वीमा सबै कुरा जमेर हिउँ बन्नेछ । त्यतिमात्र हैन यो शिशुग्रह पृथ्वीबाट सातलाख किलोमिटर नजिक मात्र पुग्यो भने पनि यसले पृथ्वीलाई पर्याप्त नोक्सान पुग्ने बताइएको छ । हाल यस शिशुग्रहबाट पृथ्वीलाई कुनै खतरा नरहेको नासाले बताएको छ ।
यो शिशुग्रह ठोक्किए के हुनेछ पृथ्वीमा ?
अन्तरिक्ष वैज्ञानिकहरूका अनुसार यदि यस आकारको कुनै पनि वस्तु पृथ्वीसँग ठोक्किए पृथ्वीमा हिमयुगको प्रारंभ हुन सक्छ । यसले पृथ्वी बिस्तारै अँध्यारो हुँदै जानेछ, चिसो अत्यधिक मात्रामा बढ्दै जानेछ र संसारभरि खँडेरी पर्नेछ । यसको प्रभाव धर्तीमा सैकडौं वर्षसम्म रहिरहनेछ ।
के छ त बच्ने तरिका ?
नासाले आफुसँग यस प्रकारको घट्नालाई रोक्न सक्ने कुनै प्रविधि हालसम्म नरहेको जनाएको छ । तर उसले यस्तो घट्नाको ठीक समय पत्ता लगाएर बचाऊको तयारी गर्न भने सकिने जनाएको छ । हाल नासाले एउटा फ्रिज जस्तै चीज बनाइरहेको र यसले यसप्रकारका घट्नाहरू रोक्न सक्ने छ ।
माघ ६ गते, २०७४ - १५:३१ मा प्रकाशित